Qarax Lala Beegsaday Gaari Ay La Socdeen Askarta Dowlada. – Calamada.com
Qarax Lala Beegsaday Gaari Ay La Socdeen Askarta Dowlada.
calamada September 11, 2018 1 min read
Qaraxan ayaa ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha oo ah deegaan dhaca wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobalka Shabeelada,iyadoo faahfaahin laga helayo qaraxaasi.
Weerarkan qaraxa ah ayaa lala beegsaday gaari ciidan oo ay la socdeen maleeshiyaatka dowlada Ridada,dhawaaqa qaraxa waxaa si aad ah looga maqlay deegaano badan oo dhaca wadada xiriirisa Xamar iyo Afgooye.
Goob-joogayaal ayaa xaqiijiyay in maleeshiyaatka dowlada Khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyay qaraxaasi ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha.
Qaraxan ayaa kusoo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamo hubeysan oo ka tirsan Shabaabul Mujaahidiinta ay weerar qorsheysan oo dhabagal ah u dhigeen maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada oo ku sugnaa xaafadda Suuqa Xoolaha, degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho, iyadoona weerarkaas khasaare lagu gaarsiiyey Murtadiinta.
Ugu yaraan labo askari oo ka tirsan maleeshiyaatka dowaladda ayaa lagu dilay weerarka,ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ee weerarka fuliyey ayaa sidoo kale soo ganiimeystay qori AK47 ah oo ay maleeshiyaatku kaga carareen goobta.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.01-01-1440 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 01-01-1440 Hijri.